Nhau nyowani dzinosimbisa kuti iyo iPhone 7 Plus ichave iine 3 GB ye RAM | IPhone nhau
Kwasara chinguva chinopfuura mwedzi kuti Apple iratidze iyo iPhone 7 nemhando dzakasiyana, kana iPhone 6SE sekukuzivisa kwatakaita mazuva mashoma apfuura, pane runyerekupe rwakawanda rwunoedza kusimbisa runyerekupe rwega roga roga, rwakakodzera kudzikiswa, izvo zvakaburitswa pari zvino. Zvakare sekureva kweDigiTimes kuburitswa zvichibva pane dzakasiyana mishumo kubva kune memory chip vagadziri, iyo inotevera modhi ichatangwa neApple pamusika, inosvika ku3 GB, panzvimbo yemaviri aripo parizvino mumhando dze iPhone 6s uye 6s Plus.
Ichi chiyero chaizobatsira indasitiri iyi zvachose mushure mekucheka kwavakatambura mushure mekunge indasitiri yadzora izvozvo zvakatungamira kukushomeka kwekugovera kweDRAM machipisi, iyo yakakonzera kuwedzera kwemutengo kubhodhi rose.
Chirevo chakataurwa naDigiTimes chinoti vagadziri Macronix International uye Powertech Technology tarisira kuwedzera mubairo fungidziro zvichibva nekuwedzera kudiwa kubva kune vanogadzira smartphone vasingatsanangure mazita. Uku kuwedzera kuri kukatyamadza kubvira mumakore achangopfuura, vagadziri havana kusarudza kuwedzera RAM yezvigadzirwa zvavakatanga pamusika.
Chirevo ichi inofanotaura fungidziro yeKGI muongorori Ming Chi-Kuo akazivisa munaNovember apfuura uye mune iyo yataigona kuverenga kuti inotevera 7-inch iPhone 5,5 ichaona yayo RAM ndangariro yakawedzerwa kusvika ku3 GB. Hatizive kana DigiTimes iri kudzokorora mushumo mumwe chete kana kana iine sosi ine chekuita neketani yekugadzira ine mamwe madhivhosi anopfuura mhedzisiro yakasvikwa neyakawedzera purofiti yevagadziri vekurangarira. Panguva ino isu tinogona chete kuita chinhu chimwe kuchisimbisa uye ndiko kumirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Nyowani nyowani dzinosimbisa kuti iyo iPhone 7 Plus ichave iine 3 GB ye RAM